How'd it happen and more reports?: WHO CAN PARTICIPATE?
IPhone,iPad တွေကနေ နိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်လို့ရတဲ့ ၀လ်ဆိုဒ်လေးတခုကို လမ်းညွှန်ပေးလိုက် ပါတယ်၊ အလကားတော့မရပါဘူး၊ ဓာတ်ပုံအရေအတွက်တွက်လိုက် ၀င်ကြေးပေးရပါတယ်၊ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ၀င်ပြိုင်ကြည့်လိုက်ပါအုံး၊
1 image:$3.50,3images:$7.50,5images:$15.50, 10 images:$27.50, 15 images:$35.50, 20 images:$50.00, 25 images:$57.50
Entries are open worldwide to photographers using an iPhone, iPod or iPad.
MARCH 31, 2015 ENDED.
- Posted using BlogPress from my iPad air2